ဟူး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဟူး…
Posted by chityimhtoo on Jun 15, 2012 in News | 60 comments
တာမွေမြို့နယ်တွင် အုန်းခိုင် ဓါးခုတ်ခံရပြီး
သာကေတနှင့် တောင်ဒဂုံတို့တွင် လည်း ပန်းပဲဖို များတွင်
ထုရိုက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အင်းစိန် ကြို့ကုန်းတွင်လည်း ဆေးလိပ်ထိပ် တွင်မီးလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်. . ။ ရှစ်မိုင်အနီးရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင် ဆူပူလျက်ရှိသော ရေးနွေးအိုးများကိုလည်း တွေ့ ရှိနေရကြောင်း ထပ်မံကြားသိရပါသည်.. ။ ။
ကျူပ်တို့မှာ ပတ်ကျိလောက် ကော်နက်ရှင်ကို အံတုပြီးတက်လာရတာပါ
အဲကျမှ အာယားအာယားဆိုပြီး ထွက်ပြေးနဲ့ 
အိုင်လက်ဖ်ဖြူ ပုတ်ဂိုရေ..ဟိုလူဝင် ဒီလူဝင်နဲ့ ခင်ဗျားတော့ ပွိုင့်တွေ တထောကြီးခိုင်တော့မယ်..
ဟဟ ရွာထဲကလူတွေလောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့ သတင်းတွေဖတ်ရတာ ချိတ်ညစ်မှာချိုးရို့ပါ ဖရဲရယ်။
ဘီအီးဆိုင်မှာ ဗိုက်ကလေး ရှကီချနေတယ် သတင်းမပါတာ..
၇အိမ်တန်းတွင်လဲ ကြက်များရက်စက်စွာ ခေါင်းအဖြတ်ခံရလျှက်ရှိနေကြောင်း ။
သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေစခန်းမှူးကတော်ကိုယ်တိုင် သူ့ ယောက်ျားအတွက် ကြက်ခေါင်းကြော် အမြည်းအလို့ ငှါ အားပေးသွားကြောင်း။
လည်ပင်းမှ သံချိတ်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ချိတ်ဆွဲ တွဲလောင်းချခံထားရသည် ကိုတွေ့ရ
ကျုံးဘေးတွင် ပုရွတ်ဆိတ်နှစ်ကောင် ကားကြိတ်ပြီး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကြောင်း
သေဆုံးသွားသော ပုရွက်စိတ်များ၏ ဆွေတော်မျိုးတော် အပေါင်းမှ
လူတို့၏ မဆင်မခြင် လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချသည့်အနေဖြင့်
ပုရွက်ဆိတ် အခွင့်အရေး အတွက်…
လူတို့နေအိမ်များ၏ သကြားပုလင်း နို့ဆီ ခွက်များ တွင်
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုရုံး စန္ဒာ ပြလျက်ရှိ…
ဆိုတော့ .. chityimhtoo ရဲ့ လက်ရှိ comment ရဲ့ အပေါ်က မန့် ပိုင်ရှင် တွေကို ငပေါ တွေလို့ ပြောချင်တာ ပေါ့ …
ပေါရုံတင်မက ဘူး တဏှာရူးတွေမှတ်လို့ ကော့ကော်ကန်ကားနဲ့စော်ပုံတွေတောင်တင်ပေးနေသေးတယ်။
ပြောပြီး ပြီဗျာ .. စိတ်လေ တယ် … … မုန်းချင်လဲ မုန်းတော့
မေးပါရစေ လေးပေါက် …
သည် ပိုစ့်ထဲမှာ ကောမန့်ရေးထားသူတွေ နောက်ထား ပြောင်ထားတာကြောင့်
ဂေဇက် သိက္ခာကျပြီး ရှိသမျှလူ အထင်သေးခံရပြီး
ဟိုဘက်က စာရေးသူတစ်ယောက်က အညှီအဟောက်တွေ တင်တယ်..
ခွဲပြောမယ်ဗျ… ဟိုက လူသစ် ချစ်ရင်ထူးက လူဟောင်း..
အဲ… သူ နောက်ပြောင်ထားပါတယ်.. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေချင်လို့ပါ ဆိုပီး
ရှင်းတောင် ရှင်းထားသေးတဲ့ ကောမန့် အပေါ်မှာ ရှိရဲ့ မဟုတ်လား …
နောက်တချက် ချစ်ရင်ထူးက တောက်လျောက် ပေါက်ကရ တင်နေတဲ့
စာရေးသူလည်း မဟုတ်ဘူး… ဒါကိုလည်း မေ့လို့မဖြစ်ပါ …
ဆိုတော့ … လူသစ်အနေနဲ့ ရွာအကြောင်းမသိလို့ ဟော့မယ်ထင်တာ
တင်မိကောင်းတင်မိမယ်… အဲ့ဘက် သွားပြောပေါ့ဗျာ ..
သည်နဲ့ ဘာလို့ လာဆက်စပ်တာတုန်း …
ကျုပ်တို့ စ နောက် ပီး မန့်ထားလို့ အရိုအသေတန်ပြီး အကြည်ညိုပျက်ပြီး
ဟိုဘက်က ဒါမျိုး တင်တာ ပါ ဆိုရင်တော့ အချက် ၂ချက် ကိုင်ဆွဲပြီး
သည်ထဲ မန့်ထားတဲ့ လူတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်တို့ သည် အမြဲတမ်း ပေါက်ကရ
ေ၇းနေသူတွေ ဂေဇက်သိက္ခာ ချနေသူတွေ မဟုတ်ပါ…။ ဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်
Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ….
နဲ့ ငြိ ပါတယ် … တယောက်ကိုတောင် မဟုတ်ဘူးနော ..
၆မျက်နှာ ပို့စ် မှာထင်ရဲ့ ..
လွတ်လပ်ချင်လို့ …အင်တာနက်မှာရေးတာ ဒါတွေလာမပြောနဲ့ ဆြာ မလုပ်နဲ့လို့
လေးပေါက်ရေးခဲ့တယ်…မကျေနပ်ရင် အယ်ဒီတာ တယောက်ထား ..စီစစ်ပြီးမှ တင်
ဆိုတာတောင် ပါသေးတယ် … ဆိုတော့..
သည်စကား အရပြောရရင် …သည်နေရာမှာ …သည်လို လာမဝေဖန်သင့်တာ အမှန်ပဲ …
၆မျက်နှာ စာသားတွေကို အတိအကျ ထောက်ခံသူ တယောက် လာပြောရင်တော့…
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် နာခံပါ့မယ် လို့ ပြောဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး … သူပြောသွားတာ..
အက်တီကတ် အပိုင်း …နီတိ တွေကိုး …..
ရင်းနှီးမှုအရ ပျော်စေပျက်စေ မန့်နေတာတွေ ရှိခဲ့ ရှိဆဲ ရှိဦးမှာပါပဲ …
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အမှားအယွင်းမဟုတ်ဘူး …ရှိသင့်တယ်.. အဲ ..အက်တီကတ်ကို
လိုက်နာ တဲ့ မန့်တာတွေလည်း ရှိရမယ်…။ ဒါ အမှန်တရားပဲ..။
ဥပမာဗျာ ..ကိုမှော်ေ၇းတဲ့ မှော်ဆြာ့ ပန်းသည် လိုပိုစ့်မျိုးမှာ
အားပေးသွားပါသည် တခွန်းတည်းပြောပြီး ထွက်သွားရင် ဒါဟာ
(မန့်ထားသူ ရှိမရှိမသိပါ. ..လက်တလော ခေါင်းထဲပေါ်တဲ့ ဥပမာပြောပြတာပါ..)
မမန့်ဘဲ နေလိုက်တာကမှ ဒါမှမဟုတ် တခြား ဟာသပြောပြီး ထွက်သွားတာကမှ
ချစ်ကြည်ေ၇း သဘော ဆောင်ဦးမယ် မဟုတ်လား..
ဆိုတော့ … ဆြာလာမလုပ်နဲ့ ရေးချင်ရာရေး ကွာ ..ဆိုတဲ့ မူကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ ကွန်းမန့်ပိုင်ရှင်က
ဒါမျိုး လာစွပ်စွဲတာ … လုံးဝ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါကြောင်း…။
မဆိုင်တဲ့ ပိုစ့် ပိုင်ရှင် နောက်ပြီး ..မဆိုင်တဲ့ မန့်သူတွေ ဖြစ်နေတဲ့အပြင် …
ပေါ်လစီ ပိုင်းအရပါ ..ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ ရှေ့နောက် မညီမှု သက်သက်ဖြစ်နေတာကြောင့်…
စာအလွန်အရေးကောင်းလို့ လေးစားရတဲ့ လူကြီးသူမတယောက်
ဖြစ်တာ ကြောင့် သည်လိုတွေ လွဲနေပါကြောင်း လေးလေးစားစား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗျား…
ဘာလို့ ဒီလောက်ပေါက်ကွဲ သွားသလဲ။
အချင်းချင်း မသိကြတာလဲ မဟုတ်။
မင်း တို့ ဒီလိုဘဲ နောက်ပြောင်တတ်တာ အားလုံးသိပါတယ် ဟယ်။
တကယ်တော့ ပါးစပ် ကပေါက်ကရ လျှောက်ပြောတဲ့သူဟာ ကုတ်ကမြင်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်ငြိမ်ကြီး နေတာက နောက်ကွယ်မှာ ပိုလို့ ကဲတတ်ပါတယ်။
(ဥပမာ ပြောရရင် ;-) )
ကိုပေါက် ကလဲ နောက်ပြောတာပါ။
ငိုမနေနဲ့။ တိတ် တိတ်။
ရော့ တစ်ရှုး။ နှပ်ညစ်လိုက်။
အင်္ဂလန် တော့ half time မှာ ၁ဂိုးရနေပြီ။
ပွဲစပြီး ဘယ်နှစ်မိနှစ် မှာ ဂိုးပြန်ပေးရမယ် မသိ။
Finally …. they won 3:2. :-)
ကဲ အရီးလတ် မထူးတော့ပါဘူး ။
ရွာသူား လူဟောင်းကြီးတွေ ၊
စီနီယာကြီးတွေပါ ချ ကုန်ကြပြီဆိုတော့ ၊
လူစုံသွားအောင် အရီးလတ် နှင့်
ကျနော်ပါ တဖက်စီ ဝင်ပြီး ရန်ဖြစ်ကြရအောင် ။
” ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်ငြိမ်ကြီး နေတာက
နောက်ကွယ်မှာ ပိုလို့ ကဲတတ်ပါတယ်။
(ဥပမာ ပြောရရင် ;-) ) ”
ဒါ ကျနော့်ကို သက်သက် ရွဲ့ပြောတာမဟုတ်လား ။
အရီးလတ် !@#$%^&*() !@#$%^&*() ။
ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) ( ကျား ) says:
to … Azzurri says:
ရန်ကုန်မြို့ တွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော မငြိမ်သက်မှူများ သတင်း ~~
Credit to Nay Ag Win
ကို Kyaw Zay Win Facebook Account မှာ ကြည့်နိုင်ပါကြောင်း …။
ဆိုတော့ ချစ်ရင်ထူး က Nay Ag Win လားဗျ။
Nay Ag win မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်လွင်မိုးပါ။ ပြုံး ပြုံး ဖါးပြုံး ပြုံး။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပြုံး။စိုးရိမ်ပူပန်ပြီး
သွားလည်းဒီဘ၀ဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သွားလည်းဒီဘ၀ပါဘဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ပြုံးပြုံးလေးနေဖို့
အခွင့်အရေးရှိရဲ့သားနဲ့ အချိန်ကုန်ခံပြီး မဲ့မနေချင်ပါနဲ့။တစ်ချို့ စာတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဖတ်ပြီး
ငါးရှဉ့် ပြုံး ပြုံး သွားပါတယ် ချစ်ရင်ထူး ရေ။ :-)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကနေ ပေါ့ပေါ့နေ .. ပေါ့ပေါ့စား ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ကိုယ့်ဟာမဟုတ်လို့ ကူး ပြီးရင် Credit ပေးရတယ်။ လူဟောင်း ဆိုပြီး မေ့လို့မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ အင်ဇာဂီ .. မင်း ကြည့်ထား ..။ .. ဒါမျိုးက ဟောင်းတာ သစ်တာ နဲ့ မဆိုင်ဘူး … Mandalay Gazette မှာ လူအထင်ကြီးအောင် ရေးတဲ့စာနဲ့ ပြင်ပ က လူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ တောင် မတူလို့ ငါ တို့ခံလိုက်ရသေးတယ်။ ဘာမဆို အပေါ်ယံ ကိုမကြည့်နဲ့ … သေချာစဉ်းစား …။ ဒီပိုစ့်ပိုင်ရှင် ကိုမင်း ဘယ်လို ပြောမလဲ ဆိုတာ ငါစောင့်ကြည့်ဦးမယ်။
အနှီ ကွန်းမန့် ၂ခုက အချိန် မခြားဘဲ တက်သွားတာ…
၁နာရီ အတွင်း လောက်ထင့် …(အထင်)
ကျနော်က ပို့စ်ပိုင်ရှင် ရေးတာကို ကိုပေါက် ပြန်ဖြေ ထားပြီးမှ တွေ့တာ ဆိုပါတော့
ငပေါ လို့ ပြောတာ ပေါတောတော ရေးထားတဲ့ ပြောင်ထားတဲ့ ပိုစ့် ဖြစ်လို့…
အပြောင် ၀င်ရေးမိတဲ့ လူတွေ ကို ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ပြန်ရေးတာ ဖြစ်လို့ …
(anyway, within this post) ဖြစ်နေတယ်ဗျာ..
ဒါပေမယ့် သူသည်လို မရေးသင့်တာ တော့ အမှန်ပါပဲ..
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ကို ၂ချက်နဲ့ ကန့်ကွက်ရရင်တော့
၁။ ခရက်ဒစ် ကိစ္စ .. ပေါ့
၂။ သည်လို မန့်တဲ့ကိစ္စ ပါ
ဆိုတော့ … လူဟောင်း(အသစ်အဟောင်း ဒစ်ခရစ်မီနိတ် လုပ်တာမဟုတ်ပါ)
ရွာနဲ့ အသားကျပြီးသား လူအနေနဲ့ အထက်ပါ အချက် ၂ချက် မဖြစ်သင့်ပါ…
လေးပေါက် ကွန်းမန့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောရရင်တော့
တဏှာရူး လို့ ရေးတာက ဟိုဘက်က မဆိုင်တဲ့ အပေါက် ကို
ဂလိုင်နဲ့ ခေါက် လို့ ပြောသင့်တယ် ထင်တာ ပြောတာပါပဲ …
ရွာမှာ ကြိုကြား …သည်လို ပုံတွေ တက်တတ်တာ ကိုယ့်ဆြာလည်း အသိပါဗျာ..
ပုံတွေရဲ့ သိက္ခာ နဲ့ ခရက်ဒစ်ကိစ္စလည်း .. စိုးရိမ်ရတာ ၀င်ပြောရတာ လည်း ခနခနပါပဲ
ဆိုတော့ …အနှီ ပိုစ့်ကိုလည်း ရှုံ့ချပါကြောင်း…တခါတည်း အတိအလင်း ပြောခဲ့ပါရစေ..။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာက ..ကျနော် တင်းတာ ပေါက်ကွဲတာ မဟုတ်ပါကြောင်း..။
ပြောသင့်တယ်ထင်လို့ ပြောလိုက်တာ သက်သက်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
အရေးအသား ဒေါသဂိုဏ်း သင့်တယ် လို့ မြင်ကြတဲ့အတွက်…
ကျနော့် အရေးအသား မပြေပြစ်ပုံအတွက်
အားလုံး ကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါကြောင်း..။
အဲ. .. သက်ဆိုင်သူ ကာယကံရှင်များကိုလည်း အပြန်အလှန် တောင်းပန် ကျေအေးသင့်ကြောင်း
ချစ်ရင်ဟောင် ရေလို့မပြောပါဘူး ကိုချစ်ရင်ထူးရေ
ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကကျောင်းရဲ့အိမ်သာထဲမှာ ပါ နေရင်း…
အပေါ်ကိုကြည့်ပေါ့ သဘောက အပေါ်ကိုကြည့်တော့ မျှားကဘေးကိုကွေ့သွာပြန်ရော
မင်းရေးထားတဲ့ ဟာသ ပို့စ်ကိုအားပေးဖတ်ယင် ကွန်မန်းတွေပေးကြတယ်..
မင်းကိုအားပေးကြတယ်…ဒါပေမဲ့ မင်းက ( ခုမှဘဲသိတော့တယ် ရွာထဲကလူတွေတော်တော်ပေါကျတာဗျဲ..) ဆိုတော့
အော်…မောင်ရင်မောင်ရယ် မမယ်မြကိုဘယ်မှာထားခဲ့ သလည်း…ဟာသရေးရင်ဟာသလို
(ဗျဲ)လို့ ရေးလိုက်လို့ ဟာသသင်္ကေတလေးမထည့်လိုက်တာပါ။ဒီစာကြောင်းလေးကိုဘာလို့
နောက်ဆုံးကနေ စရေတွက် မယ်။
၁။ ဟူး … (Credit မပေး)
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍
၅။ မောင်းတောမှာ ရဲ၂ယောက်သေသွားတယ်
၆။ တောင်ကုတ်ကိစ္စ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးလုပ်ဆောင်မည်။
၈။ ကျောက်နီမော်မှ မုဒိန်းကျင့်လူသတ်ကောင် ထက်ထက်၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း
၁၁။ ၂၉-၅-၂၀၁၂နှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင်မြန်မာန်မာနယ်စပ်နစ်မြစ်အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ မြစ်နားရွာ။ခြံချောင်းအနီး
၁၂။ ရှမ်းလမ်းဂွဈေးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ ည၁နာရီကျော်ခန့်က
ကိုယ်တိုင်ရိုက် လို့ ထင်
၁၃။ Y-talk မှလွဲပြီးကျန်အွန်လိုင်းမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှူ့များကိုအရေးယူတော့မည်လို့ဆို။
၁၄။ စက်ခေါင်းမှူးလက်ထောက် ဦးဌေးနိုင်ရဲ့သက်စွန့်ဆံဖျား အသက်ကယ်တင်ဆောင်ရွက်မှုကို လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်
၁၅။ Red Link ဘာလည်းဘယ်လည်း
စာ ၁၄ ကြောင်း နဲ့ ပုံတစ်ပုံ။
၁၆။ ဒီရက်ပိုင်း google က gtalk ဆာဗာဘာဖြစ်လည်းမသိပါဘူး။
စာ ၅ ကြောင်း
၁၇။ ဆူနာမီနှင့်ပတ်သတ် ဦးထွန်းလွင် ဗျူး
ပုံ တစ်ပုံ Credit မပါ။ စာ “ခွိခွိ”
၁၉။ ကဲလုပ်ကျပါဦး Red link
ပုံ တစ်ပုံ။ စာ ၆ ကြောင်း
၂၀။ မိုးမမြင်လေမမြင် ၀န်ကြီးများလုပ်ရပ်လုပ်ဇတ်များ…
Credit မပေး2ပိုစ့်
ကူး ပြီး ပြန်တင် (Credit ပေး) တာက 12
ကိုယ်တိုင် ရေ6းပိုစ့် စုစုပေါင်း စာကြောင်းရေ 34 ကြောင်း ပုံ 8 ခု
ဒါမျိုး နည်းနဲ့ တော့ မဟောင်းစေချင်ဘူး …။ ပြန်ကြည့်ပြီး မမေ့ အောင် ပိုစ့် အခု 20 ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။ “ခုမှဘဲသိတော့တယ် ရွာထဲကလူတွေတော်တော်ပေါကျတာဗျဲ..” တစ်ရွာ လုံးကို ငပေါတွေ လို့ပြောတာကျ .. ညိမ်ခံ နေပြီး။ တဏှာရူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါလာမှ ထပေါက်ကွဲ တယ်ဆိုတော့ ….. ဟဲ ဟဲ ဟဲ …။
ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်းနာမယ်က.. ဘာလို့ ၂ယောက်ဖြစ်နေတာလည်း…
chityimhtoo ရဲ့မန့်ထားတာတွေ.. အောက်ကလင့်ကနေ… တပေါင်းတည်းကြည့်နိုင်ကြောင်း..
အဲဒီကိတ်စတွေအတွက် စည်းကမ်းတွေကို အဒ်မင်က မကြာကဏထုတ်ပြောလေ့
ဥပမာ တခုပြောရရင် အီလည်းဗင်းဂျာနယ်ကနေ မကူးပါနဲ့လို့ အတိအလင်းပြောခဲ့သော်လည်း
ပို့စ်တခုရဲ့စာလုံးရေ သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာကလည်း စည်းကမ်းအနေနဲ့ ရေးထားရုံသက်သက်ပါဘဲ။
ခုတလော ပိုလို့ဆိုးပါတယ်။ လေး ငါး ကြောင်းနဲ့ ပို့စ်တင်နေကြတာ (နှေးကွေးလွန်းတဲ့အင်တာနက်သုံးသူ
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဆိုဒ်မှာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ ပြောချင်ပါတယ်)
စာ ၅ ကြောင်း ဆိုဒ်
မတိကျ မသေ မချာ အချက်အလေးတွေ ရေးတဲ့ ဆိုဒ် လို့ ပုံဖော်နေကြရင်
တကယ်တမ်း သေသေချာချာ အားထုတ်ပြီး ရေးနေကြတဲ့၊ အရည်အချင်းအစွမ်းအစကြီးမားလှ
တဲ့ ဂေဇတ်ရဲ့ပင်တိုင် စာရေးဆရာများ အတွက် ဝမ်းနဲစရာပါဘဲ။ အားနာစရာလည်းအရမ်းကောင်းပါ
တယ်။ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့သူတို့ရဲ့စာတွေဟာ အပေါ်ကအချက်အလက်တွေရဲ့အရိပ်ထိုးမှာ ကျနော်လဲ
စာပေဟာတန်ဖိုးရှိလှပါတယ်ဆိုတာ စာရေးသူက တန်ဖိုးတခု ထားပြီးရေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောစရာ
ဒါပေမဲ့ ဒီအထက်ပါ ကူးချ၊စာလုံးရေနည်း တဲ့ ကိတ်စတွေကိုတော့ ပြောင်းလဲဖို့လိုကိုလိုပါတယ်လို့…
နေစမ်းပါဦး ဒီဟာသစာသားလေးက ဘယ်သူကဘယ်လိုစရေးလည်းတောင်မပါဘူး။အေးဖေ့ဘုတ်တွေ
သွားရတာလည်း၊Mလုလင် ဖင်ခေါင်းတော့လာမကျယ်နဲ့ မကျေနပ်ရင်ဘလော့လိုက်။မင်းတို့ပွိုင့်ကိုလို
ဆဲတာတို့ စည်းကမ်းမလိုက်နာတာတို့ကျတော့ မင်းတို့ပါးစပ်တွေပိတ်နေကျတယ်။သူကြီးကတော်တော်
မင်းတို့ကပိုဆိုးနေတယ်။ chityimhtoo ဆိုတဲ့ နာမည်ကလည်း နာမည်တူမရှိလို့ငါရွေးခဲ့တာ။ငါ မန်ဝင်တုန်း
တာလည်း၁နှစ်ကျော်ကြာပြီ။အေးနာမည်တူရှိလည်း ငါဒီနာမည်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ငါတို့လည်း ၂၄
နာရီအွန်းလိုင်းရှိနေတဲ့လူတွေ mandalaygazette ကို တစ်နေ့ကို အကြိမ်၃၀လောက်ဝင်ဖတ်တယ်။
ဟယ် ။ မလုပ်ကြပါနှင့်ကွယ် ။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးနှင့် ။
တကယ့် ရွာသူား လူဟောင်းကြီးတွေပါ ချ ကုန်ရတယ်လို့ ။
” Clashes of Titan ”
တော်ကြပါတော့ကွယ် ။ ချုပ်တီးကြပါအုန်း ။
ဒုအကြိမ်ဝင်ရောက်ကြောင်း သတင်းးးးးး ပို့
အကြိမ် ၃၀၂ ကြိမ် ဝင်ရောက်ကြောင်း သတင်းပို့
hit တောင်မှ 193 ဘဲ ရှိသေးတာကွဲ့
ဒီနေ့မနက် အလုပ်မစခင် ရွာထဲဝင်တယ်။
ရဲဘော်မောင်ထူး ပိုစ်ကို တွေ့တယ်။
ရွာသူ မသဲနုအေးက မန်းထားတယ်။
အစကတော့ ဒီပုံတွေကို မနှစ်သက်လုိ့ မန်းမလို့ဘဲ။
တော်ကြာထုံးစံအတိုင်း လူဟောင်းက ဖိတယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့မမန်းဘူး။
ချစ်ရင်ထူးပိုစ်ဝင်မန်းတယ်။
သူကိုယ်တိုင် ငပေါတွေလို့ ဟာသလုပ်ထားတာဖတ်ပြီး ပထမပိုစ်က ဖတ်ထားတာနဲ့ဆက်ပြီး မန်းလိုက်တယ်။
ဒီလိုရေးတာက ဘယ်သူ့မှ မထိခိုက်ဘူးလို့ ယုံကြည်လို့
(ပေါရုံတင်မက ဘူး တဏှာရူးတွေမှတ်လို့ ကော့ကော်ကန်ကားနဲ့
ဒီလိုမန်းတဲ့အတွက်ချစ်ရင်ထူး မှာ ဘာမှထိခိုက်မသွားပါ.။
ချစ်ရင်ထူးကလဲ ဒီလိုပြောလို့ စိတ်ဆိုးမယ်မထင်ပါ။
ကျနော်ရည်ရွယ်တာ ကလဲ ချစ်ရင်ထူးကို မဟုတ်မှန်း သိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ကျနော်ရေးသောစာထဲမှာလဲ ရွာထဲကလူပေါတွေများလို့ တဏှာရူးတွေထင်တယ်လို့သဘောသက်ရောက်သော အရေးအသားမပါပါ။
တဏှားရူးတွေထင်လို့ ဆိုသော စကားရပ်က လဲ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါတယ်လို့မယူဆလို့ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ပြောခဲ့တဲ့အန်စာတုန်းကိစ္စမှာ ကော်မင်းပေးတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ပြန်ရေးခဲ့တယ်။
ကော်မင်းပေးတာ တိုတိုရှည်ရှည် ဘာရေးရေး မကန့်သတ်သင့်ကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
မလုံတလုံပုံတွေ တင်တာနဲ့ ကျနော်ရေးတာနဲ့မပါတ်သက်ပါ။
ဒီလိုပြောလို့လဲ ရေးလို့လဲ အန်စာတုန်းနှင့်ကျနော့်ကြားမှာ ပြဿနာမရှိပါ။
ကျနော်တကယ်လို့သာ မောင်ဂီပြောသလို ငါတို့ရွာ က လူပေါမို့ တဏှာရူးထင်ခံရတာလို့ ပြောချင်ရင်လဲ
နောက်မဆိုင်သောကိစ္စမန်းတယ်လို့ပြောရရင်တော့ ဒီရွာထဲမှာ တင်ထားတဲ့ပိုစ်အကြောင်းအရာကနေပြီး
သွေလွဲစွာ ကွဲလွဲစွာမန်းကြသော ပို့စ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရပြောရလျင် ကျနော့် မအမ်းစကောင်း အမ်းစကောင်းမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကလဲ စည်းကမ်းရှိမရှိ တော့ ကျနော်မသိပါ။.
ကျနော်ရေးသမျှတွေမှာ စတာနောက်တာက လွဲလို့ လူတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်အောင်ရေးလိုသောဆန္ဒ
ကျနော်ကို လေးစားပါ ရိုသေကြပါ အထင်ကြီးပါလို့ မပြောသလို
တမင်သက်သက် လူအထင်ကြီးအောင် ရေးတာ ပြောတာမျိုးလဲမရှိပါ။
ကိုယ်သိသလောက်ကို ပြန်ဖြန့်ဝေတာက လွဲလို့ ဘာမှခံစားချက်မထားပါ။
သေချာတာတစ်ခုပြောရင် စာထဲမှာဖြစ်စေ အပြင်လောကမှာဖြစ်စေ သူများမလေးစားလောက်သော
အနေအထို်င် အပြောအဆို အမူအကျင့်မရှိတာကတော့ သေချာပါတယ်။
အရှင်းဆုံးပြောရင် သူများမထိခို်က်တာ မှန်သမျှ ကိုယ်တွေးမိတာ ကိုယ်ရေးပြီးတင်
လုလင်နဲ့ချစ်ရင်ထူး ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ။
ကိုယ်ပြောချင်တာကိုယ်ဝအောင်ပြောပြီးရင် အရင်လို လယ်ပင်းဖက်ပေါင်းကြပါ။
မှတ်ချက် အပေါ် လယ်ပင်းဟု မှတ်စေကြောင်း ရယ်ပါ
လည်ပင်းဖက် ဆိုလို့ …. ( ချစ်ရင်ထူး – ၂ ) နဲ့ မှားနေတာလား ဦးပေါက်ရေ …။
ဟုတ်ပါတယ် လေးလေးအန်ကယ်ဦးပေါက် ခင်ဗျ
ညီလေးတို့ မြန်မာစာကို သေခြာဖတ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ကြပါ လို့
ချစ်စရာကောင်းသော ချစ်စရာ အချစ်တို့၏ဆရာ ချစ်ဆရာ
ကိုယ့် ရွာသား အချင်းချင်းတွေ အဲ့လောက်အထိ ပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာ…
တခြား ကျွန်တော်တို့တွေ မစည်းမလုံးဖြစ်နေတာမြင်ရင်
တခြား မကြည်တဲ့ အုပ်စုတွေ ၀မ်းသာနေကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကျနော်ကတော့ ကိုယ့် ရွာသားအချင်းချင်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ
ကိုရင့်ကိုလဲ အဖြေအရွေးတော်လို့ အံ့သြမိတယ်။
ဒါပေမယ့် စပြောတဲ့သူက ကိုပေါက်မဟုတ်ဘူး။
စပြောတဲ့လူက ကိုပေါက်မဟုတ်ဘူး ..
ဟုတ်ကဲ့ ..ဘယ်သူလို့ ဆိုလိုချင်တာပါလိမ့် …???
လုလင်ဝင်လာတယ် …ချစ်ရင်ထူး ၀င်လာတယ် …
ကျနော် ရှင်းပြစရာ ရှိတာ အားလုံး ရှင်းပြခဲ့ပြီး ရေးခဲ့ပြီး
တောင်းပန်ခဲ့ပြီး မို့ ဘာမှ ဆက်ပြောစရာ မကျန်ပါ …
သဘောထား ကွဲလွဲလို့ ရတယ် ..
မမြင်မတူလို့ ရတယ် …တူတာတွေ ပေါင်းလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ဆြာတို့ ….
ပြောကြပါဦး …ဘယ်လိုတုန်း …
အပြင်မှာ နင်က နာ့ထက် ဆယ်နှစ်ကြီးပေမဲ့ ရွာထဲမှာတော့ နင်က ခလေးလိုနေတာ..
ရွာထဲမှာ နာက လူကြီးလိုနေတာ..
အဲတော့ နာ့စကားနားထောင်.. ဘီအီးတစ်စိတ်တိုက်.. ဟိုက်စ်..
ကျနော်ဆို ပေါ့ပါးလွန်းလို့အင်္ကျီတောင် မပါဘူး.. ( လျှော်ထားတာ မခြောက်သေးလို့ )
အပျော်အပျက်ပို့ စ်ကနေ စိတ်ဝမ်းမကွဲကြပါနဲ့ 
အူးကြောင်ဂျီးနဲ့ ကြေးမုံဂျီးလို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကျီစားကြနော…
အိုင် ဆိုတာ………ရန်ကုန် မြို့ ကားလမ်းပေါ်မှာ ယခုချိန်မြင်တွေ့နိုင်ပါ၏။
လက်ဖြူ ဆိုတာ….ရေနွေးပူ လောင်းမိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ထုံးအိုးထဲ လက်နှိုက်ပြီး ပဲ ဖြူလိုက်ပါဗျာ .. ရေနွေးနဲ့ က ပူပါတယ်။
ဒီလို ရွာသူားတွေအချင်းချင်း.. စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်.. ကော်ပီပို့တင်တဲ့..ကိုရင်chityimhtooကို.. ပြင်းပြင်:ထန်ထန်.. သတိပေး. .တောင်းပန်လိုက်တယ်ဆို.. တကယ်ထင်ကြမှာလား… ဟင်င်င်…
ခုလိုပြေလည်သွားတာ ကောင်းပါဒယ်..ကျုပ်ကတော့ ဟာသဆို ဟာသဘဲ..
ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အညီ ညီရင်းအကိုများကဲ့သို့ အေးချမ်းကြပါစေ….
ရင်ဝယ်ထား သားသမီးများကဲ့သို့ မေတ္တာပွါးများနိုင်ကြပါစေကုန်…..။
ဟုတ်ပါတယ်ရွာသားအချင်းချင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့။ မနောဖြူလေးတို့၊အိတုန်တို့၊သဲနုအေးတို့ကို chityimhtoo
အခုမှ ကော်မန့်တွေကြည့်ရင်း တော်တော်ရန်ဖြစ်နေကြသကိုး ဟဟ
တော်ပါတော့ဗျာ ညီအစ်ကို၊မောင်နှမတွေပဲ ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့
အချင်းချင်းမှမညီညွတ်ရင် သွားဘီ။ကိုချစ်ရင်ထူးက ပျော်စေချင်လို့ ရွာသူားတွေကို စတာပါဗျာ…